साताको तस्वीर : सुख्खा पहिरोको सास्ती । – ebaglung.com
२०७३ चैत्र ६, आईतवार १३:२०	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
फागुन २२ गते विहान ५ बजेको समयमा बडीगाड खोलामा मिसिने दरम खोला एक्कासी सुकेपछी बडीगाड र दरमखोलाको दोभानमा अवस्थित खर्वाङ बजारगवासीहरु ‘के भो यस्तो ?’ भन्दै डराएका मात्र होईनन् आत्तिए पनि । खर्वाङ प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रनानि भोजबहादुर बानियाँ प्रहरी टोली सहित घटनास्थल तिर दौडिए ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग माथि रिघाको मनेवापाटाबाट अकस्मात सुख्खा पहिरोे खस्दा दरमखोला थुनिएर ताल परिसकेको थियो । लोकमार्ग पहिरोले बगायो भन्ने चिन्ता भन्दा दरमखोलामा बनेको ताल कुनैपनि समय फुट्ने ‘जलत्रास’ले त्यसदेखी तलतिरका बासिन्दाहरु त्राहिमाम् बने । करीब करीब दिन भरी नै मानिसहरु त्रसित अवस्थामै रहे । पहिरोले विद्युत पोल पल्टाउदा एक महिलाको करेण्ट लागेर उपचारकै क्रममा ज्यान गयो । पहिरोमा एक घर जोखिम अवस्थामा पुगेकोले अन्यत्र स्थानान्तरित गरेर प्रहरीले उद्धार ग-यो । खोला थुनिएपछी त्यस देखी तलका कुलाहरु सुके । वामी टक्सारका दुई विद्युत आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन बन्द हुन पुग्यो ।
साँझ पख देखी पोखरीमाथीबाट पानी बग्न थाल्यो, स्थानीयवासीमा जलत्रास कम हुँदै गयो । जुन त्रासमा स्थानीयवासी थिए, त्यो अन्त्य भयो ।
पोखरीबाट पानी बगेपछी कुलाहरु सन्चालनमा आए । विद्युत आयोजना सन्चालनमा आएर विद्युत उत्पादन सुरु भएर वामीवासी धेरै समय अँध्यारोमा बस्न परेन । अहिले जलत्रास छैन । तर लोकमार्ग राम्ररी सुचारु हुन सकेको छैन । शुक्रबार देखी एक तर्फी सवारी सन्चालन भएको समाचार आयो । शनिवार दिउँसो पहिरोले पुन लोकमार्ग अवरुद्ध हुन पुग्यो । सयौँ यात्रुहरु र दर्जनौ सवारी साधनहरु अलपत्र परे । दुई घण्टा जति लोकमार्ग अवरुद्ध बनेपछी सवारी साधनहरु पुन एकतर्फी सन्चालनमा आउन थालेको छ । तर कुनैपनि समय हिँजो शनिवारको जस्तो सास्ती नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । पहिरो हटाएर लोकमार्ग सुचारु गर्न अझै चार/पाँच दिन लाग्ने यात्रुहरुको ठहर छ ।
पहिरो र पहिरोले थुनिएको दरमखोलाले त्यस्तो डरलाग्दो उत्पात मच्चाएन । भगवानका कृपाले जनधनको ठुलो क्षती हुनबाट बच्यो ।
बेला न कुबेला, सोँचे न सम्झेको यस्तो सुख्खा पहिरो कुन भगवान रिसाएर झरेहोला ? या, कुन कसको लापर्बाहीले सुख्खा पहिरो खस्ने अवस्था आयो ? सरोकारवाला निकायले अध्ययन/अनुगमन गरेर भविष्यमा यस्तो दुर्दशाको स्थिति पुन दोहोरिन नपाओस भन्ने तिर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
लोकमार्ग स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएर डोजर घुमाई रहेका कन्स्ट्रक्सन कम्पनि र दरमखोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने काममा लोकमार्ग माथीबाट पाईप विच्छाइरहेका हाईड्रोपावर कम्पनिको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताले गर्दा अकष्मात सुख्खा पहिरो खसेको स्थानीय सर्वसाधारण जनताको बुझाई छ ।
रिघा मनेवापाटाको यो सुख्खा पहिरो, मध्यपहाडी लोकमार्गका निम्ती दीर्घ समस्याको रुपमा उपस्थित भएको छ । प्रकृतिसंग खेलबाड गरिएकै कारण सुख्खा पहिरो खसेको हुनाले पहिरोका कारक तत्व बनेका यी दुई कम्पनिमाथी यो विनाशको भरपाई गराउन सरोकारवाला निकाय चुक्न नहुने देखिन्छ ।
२०७३ चैत ६ ।
शनिवार लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदाका बखतका तस्वीरहरु- सुवास पन्त, बागलुङ ।
बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका नगरपालिकामा को को खटिए अधिकृत ?